WinUtilities Pro 15.2 crack + Latest License Key and Code 2018 [Imtixaanka]
Home » crack & Activators » WinUtilities Professional Edition 15.2 crack
by Anastasiya Libra | February 8, 2018
WinUtilities Professional Edition 15.2 Crack waa award-winning ururinta qalabka si ay tayadoodii iyo dardar waxqabadka computer aad ah. Qalabkani waxa uu ka kooban yahay korontada nadiifinta faylasha ku meel gaar ah on saxannada aad, diiwaanka, masixi aad taariikhda browser Internet iyo codsiga, khasnado, iyo cookies. WinUtilities Crack Pro kale oo ay taageertaa in defragment drives disk iyo diiwaanka aad si loo hagaajiyo xasilloonida iyo waxqabadka aad PC ee. Dhisay-in Coobbi xawaaladaha kuu ogolaanayaa inaad si ay u maareeyaan barnaamijyada xawaaladaha in si toos ah ku shuban leh daaqadaha, hagaajin tuuryo jabay, heli files hirgaliyay iyo uninstall software baahnayn. Tilmaamo More ka mid ah tirtirka file aamin, recycle bin kaararka, hawlaha dayactirka jadwalka iyo soo kabashada xogta.
Isticmaalka WinUtilities Professional Edition Crack & code liisanka pro in ay tayadoodii nidaamka waa mid aad u sahlan oo fudud. The modules ama qaababka aad dooran kartaa ka mid ah diiwaanka, xusuusta optimizer, defrag, defrag disk, nadiifiye xawaaladaha, iyo OF Faydi. Mid kasta oo ka modules waxa uu leeyahay rajada dheeraad ah marka aad iyaga ka dooran. Optimizer Memory, tusaale ahaan, ku siin doonaa xogta iyo xal u ah processor iyo RAM iyo oggolaadaan in aad xakamayso qaab iyo optimizer goobaha.
WinUtilities Professional Edition 15.2 Crack uu leeyahay shaqo dayactir hal click a kuu oggolaanaysa in aad qabtaan haynta aasaasiga ah ama sare meel dhexe. The doorka muhiimka ah waxaa ka mid ah udhigto ee noocyo badan oo files sida faylasha ku meel gaar ah, cookies Internet, fayl junk, taariikhda internet iyo samaynaya baaritaan deg deg ah diiwaanka nidaamka. Shaqooyinka sare kala dhig dhigi karaa oo defragment diiwaanka, falanqaynta iyo defragment drive disk, iyo falanqaynta iyo dayactiro qalad diiwaanka aan sax ahayn iyo entries. The button dayactirka hal click ku ordi doonaa mid ka mid ah qalabka aad rabtid in isku xigxiga oo markaas idin siin doorashada ee sida aad jeclaan lahayd in la dayactiro qaladaad. Waxaad sidoo kale balan karaan nadiifinta disk; nadiifinta taariikhda, nadiifinta diiwaanka iyo disk defragging si toos ah iyadoo la isticmaalayo software dayactir PC this.
WinUtilities 15 Crack Pro & Features Patch
WinUtilities Professional Edition 15.2 Crack isku daraa defrag disk ah iyo waxa daahirka, diiwaanka nadiif ah & defrag, nidaamka ayna, howlgal gaarka ah, dhalato toobiye, ayna disk, files junk nadiif ah, iyo in ka badan, in la damaanad qaado in aad PC u ordayaan sida mid cusub.
mar kale ku siinayaa dareen computer cusub.
Uma baahnid in aad in ay xirfad ama wax badan oo ku saabsan computer ogaado. All aad u baahan tahay inaad samayso waa ku rakibi, iyo qasabno yar dhigi doonaa inaad mar raaxaysan dareen PC cusub.
waxqabadka wanaagsan ee aad PC waayo, shuqulkiinna ama ciyaaraha.
Dhibaatooyinka PC nadiif ah iyo dayactir la One-Click
Fast iyo awood leh Windows Nadiifi.
Taageer oo dhan versions of Microsoft Windows.
Easy in ay isticmaalaan.
yutiilitida Download guul xirfadeed 15.0 Mudanayaasha oo muhiim ah
Ku rakib Setup ka bixi sida caadiga ah loo soo dajiyo
Software Orod Software ah
furayaasha Serial readme.txt furan & Registered Software ah.
Waxaad ku dillaaca.
Ka bilaw Barnaamijka Crack ah & Ku raaxayso.
← Avast SecureLine VPN License 2018 Wondershare Video Converter 10.2.2.161 Ultimate Crack + Key →